Canuggii Ugu Saamaynta Badnaa Kubadda Cagta Oo Geeriyooday+Sawiro | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Canuggii Ugu Saamaynta Badnaa Kubadda Cagta Oo Geeriyooday+Sawiro
(08-07-2017) Bradley Lowery oo uu ku dhacay xanuunka halista ah ee Kansarka nooc ka mid ah oo dunida dhif ku ah, isla markaana malaayiintii qofba hal ruux ku dhaca, ayaa geeriyooday gellinkii hore ee Jimcaha.
Bradley Lowery oo ka mid ahaa taageereyaasha kooxda Sunderland ayaa sannadkii hore qabsaday dunida markii uu garoonka soo galay iyadoo uu gacanta haysto Defoe oo ay saaxiibbo yihiin, isla markaana garoonka oo dhan looga istaagay. Kulan kale oo Sunderland ay la ciyaartay Chelsea, ayaa uu garoonka soo galay, waxaana uu ka qiiraysiiyey tobannaan kun oo garoonka fadhiyey, kubbad loo dhiibayna waxa uu u laagay garoonka si ay ciyaartu u bilaabanto. Kulanka Chelsea, waxa uu Braldey wakhti la qaatay Diego Costa iyo asxaabtiisa kale, hase yeeshee, qofka aan marnaba gacantiisa sii deynin ee ku sifeeyey saaxiibkiisa dunida ugu wanaagsan waxa uu ahaa Defoe oo shir jaraa’id oo Khamiistii uu qabtay markii uu ku biiray Bournemouth ilmada xajisan kari waayey, halkaas oo uu ka sheegay in qofkii uu dunida ugu jeclaa asxaabtiisu uu halis ku jiro oo xaaladdiisu ay dhimasho ku dhow dahay.
Bahda dunida kubadda cagta oo ay ugu horreyso kooxda Sunderland ayaa tacsi u diray ehelka uu ka geeriyooday ilmahan yar ee lix jirka ah oo geeridiisu naxdin ku noqotay dunida, isla markaana ay saamaysay dhamaan taageereyaasha Ingiriiska gaar ahaan kooxda Sunderland.
Si kastaba ha ahaatee, Bradley waxa uu xili ciyaareedkii hore ahaa ilmihii yaraa ee ugu saamaynta badnaa garoomada, gaar ahaan kuwa Ingiriiska.